Nguva YeMicrosoft - Dhawunirodha Nguva dzeMac Mara
Face Time chinhu chinoshamisa Anwendung akasikwa Apple Inc. Izvi Video nvidia chigadzirwa rave ridiculously zvive nyore kuti chokuita nevamwe nokuita vhidhiyo kana zvakarekodhwa zvinoda. Izvi hazvidaviriki Face Time app iri nevanopinda pamwe namano zvose zvokutsigira IOS uye pamusoro Macintosh makombiyuta pamwe Mac Os X 10.6.6 uye gare gare.
facetime nokuti mac pumpkin download
facetime App nokuti mac pumpkin
vakasununguka facetime nokuti mac pumpkin
Download facetime nokuti mac pumpkin vakasununguka
facetime nokuti mac pumpkin Os X
facetime download nokuda mac pumpkin
vakasununguka facetime Download kuti mac pumpkin
Anwendung uhwu hwakatanga akagadzirirwa iPhone 4 vanozvishandisa asi ikozvino nokuda kwayo nokukurumidza mukurumbira, chinova pakuvara nyaya dzose Apple namano kusanganisira iPhones, iPad, Mac, uye iPod touch. Kukurukurirana chinhu chinokosha muupenyu ano uye zvino unogona nyore kushandisa Face Time pamusoro mac pumpkin kwako kuramba uchikurukura bhizimisi rako uye muupenyu hwedu.
In Mac wako, unongofanira kuva yako Internet kubatana kana cellular Data uye ipapo unogona kutaura nyore yako nevanhu chete watinya chete. Izvi App yemakwikwi pakati Face Time akaita kuti zvibvire kuti utaure mhuri kana shamwari paunenge parwendo, anogona kugara vachikurukura vashandi venyu, anogona kupa mharidzo, taura zvako vatengi uye mazita anopfuurira.
It ndiye, utsanzi, pachena, nzwisisa uye zvakakunakira nzira kuita vhidhiyo kana makaseti foni kuramba chokuita nevanhu munyika Apple mano. Nyaya iyi kuchakubatsira kunzwisisa inokosha kudhanilodha zvinhu, kushandiswa uye zvimwe zvinoumba Face nguva Mac wako.
1 Download Face Nguva Mac Os:
3 Mamisirwo FaceTime musi Mac:
3.3 Zvakawanda kubva pasiti yangu
Download Face Nguva Mac Os:
Nokuti kushandisa Face Time musi Mac wako, chiri nyaya the clicks shoma. Face Time chinhu inbuilt Anwendung mu mac pumpkin yako. All achangobuda shanduro Mac akatorwa kwerubwinyo rwakagara rwuripo yakaiswa Face Time.
All unofanira kuita kungotaura zviri kuwedzera iPhone nhamba yako uye Apple tsambambozha ID uye vanogona zvikuru yepamusoro mavhidhiyo nvidia mano pamusoro mac pumpkin yako. Unogona kuwedzera vokukurukura mamwe vanoshandisa kushandisa Apple mano kusanganisira Mac nyore, iPhones, iPad, iPod, nezvimwewo. Unogona kushandisa kwako Apple Id neindaneti sezvo wako Caller ID kutaura dzimwe vanoshandisa munyika Apple.
In case you do not have an in-build Facetime app in your mac, unogona kungoti download kushanyirazve Mac App Store. Nokuti kushandisa Mac App Store, unofanira kuva kanenge Mac Os X 10.6 kana yepamusorosoro. Unogona kana kuwana Mac App Store ari pakombiyuta yako kana iwe angazviziva mu pre-yakaiswa App Store.
Tsvaga Facetime appp by writing Facetime in the search bar of the in-build Mac Apple store or directly click HERE.
Kupinda kwako Apple ID yokutenga software iyi
Zvakakosha kunzwisisa, kuti Face Time iwe uchava gadza kubva Mac App Store ndiyo yakwegura shanduro. The latest version of Facetime is available in Mac OS X 10.6 kana yepamusorosoro. It is recommended to download FaceTime only if you are using an older version of Mac.
Kamwe iwe ndakagadza kana kuwana Face Time zimbabwe in Mac wako, unogona kuita risingaperi mavhidhiyo kana makaseti panodana vose vamwe vanhu vachishandisa Apple namano.
Kana unofanira kuva Mac pamwe Mac Os kana uine Mac Os X 10.6 kana yepamusorosoro.
Zvose contactsGoogle dzaunoda kushandisa kuti vhidhiyo kana ekuteerera zvinotoda kuva Apple I mano kana ivo zvinofanira kushandisa Mac.
Sezvineiwo, unogona kunakidzwa Face Time ekuteerera muna Mac yenyu vanoshandisa uchishandisa Apple Watch.
Ivai nechokwadi kuti zvakakodzera uye nokutsanya Internet kubatana kuitira kuti unogona kunakidzwa zvizere unhu Video kana makaseti zvinoda pasina zvinovhiringidza.
Unofanira kuita kwako Apple ID kutanga kushandisa Anwendung ichi.
Mamisirwo FaceTime musi Mac:
Unofanira kutevera vose pazasi matanho kutanga unobva kubudikidza Face Time nevamwe vanoshandisa.
Chekutanga, vomurova yenyu Face Time zimbabwe on Mac wako. Unogona kuita izvi kuburikidza kana uchishandisa pre-yakaiswa zimbabwe on Mac kana kugadzwa Face Time kubva Mac App Store
Pinda vamuri Apple ID uye kana usina ID yako, unogona sika Poshi.
Pedzisa ongororo gadzira
Unogona kuziva mashoko ako kana kuwana kubatana kwako chikero chetsamba yemumhepo kana iwe unogona kuwana ongororo kodhi ako nhamba yenhare.
Pashure ongororo muitiro, unofanira wedzera nhamba dzenhare uye e ids of other contacts to start making your first FaceTime call.
The Software muchakumbira zvaunofarira kuita maCD kana paIndaneti. Unogona kusarudza chero unoda chokuita nevamwe vanoshandisa.
Isai mashoko mamwe vanoshandisa kusanganisira e-mail, zita kana nhamba dzorunhare. Unogona kuzviita nokupinda ruzivo urwu pamusoro kutsvaka kamwechete.
pashure, pavanoshandisa runhare kana kamera kuti unhu runhare chete risingaenzaniswi Anwendung pamusoro Face Time.
Kana uchida kuti zvakabatana nevamwe Apple vanoshandisa kana vava kudanwa uye kwete kuwana kwenyu I Phone kana ini Pad, zvino unogona kukurumidza kushandisa Mac wako kuenda chikumbiro.
Uyezve, kana uri pakati foni yako uye kusandura chero zvakamira ipapo iwe kuenderera mbeva yako uye baya chero nzira
Unogona mbeveve Akaroa kana Unmute nayo
Unogona kutsausa vhidhiyo pamusoro uye kure zvichienderana zvaunofarira
Unogona resize sefa dzenyu kuona zvakajeka mufananidzo
Unogona kugumisa foni yako pose uchida
Zvikazo, uchida kuchinja chero mamiriro Face Time musi Mac wako, unogona nyore kuita izvi nokuenda Apple Muterere ipapo kuenda ezvinhu zvaunofarira ipapo kuenda Notifications. A hwindo achawana akazaruka sezvinoita pazasi:
nyore unogona batidza kana kure chero chinhu kuti raunoda. Unogona kushandura inzwi Notifications, App mifananidzo, ziviso inogadziridza uye zvakawanda
chinofadza Chimwe chinhu ndechokuti, you can make group calls through group Facetime audio or video calls. Kusvika pa 32 contactsGoogle anogona kushandiswa boka vachidzifudza. Izvi zvinobatsira chaizvo kuti vashandi, sangano, uye mavanga. Izvi zvinobatsira kuti dzaiitirwa vashandi uye vatengi kubvira rose pamwe chete watinya chete.
The article here has detailed information to setup and use facetime on mac. Ndinovimba nyaya yave idzidzise kwauri uye iwe akasimuka hunoshatisa Data kubva chidimbu ichi. Kana muine mibvunzo, chiigoverane icho mubhokisi rekutaura pazasi uye ugovane neshamwari dzako uye mhuri.
Drawpile For PC Windows 10/8/8.1/7 - Yemahara Kurodha Nyowani Shanduro
Facebook Lite YePC